Okporo ụzọ | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Inwe saịtị magburu onwe ya ga-enye gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndepụta na-enweghị njedebe nke ohere iji nwee ọganihu na ụwa dijitalụ. Kpọmkwem ma ọ bụrụ na ị lekwasịrị anya n'ezie okporo ụzọ, ị nwere ike ịchọpụta na ị ga-eme n'eziokwu karịa ịre ahịa na ịnye ụlọ ọrụ nke gị ka ịchekwa ego niile ị na-enweta.
Ndị mmekọ na-atụ anya ka ị na-achụ gị ma kwadebe ijikwa ọtụtụ njikọ dị ka ndị na-ere ahịa n'onlinentanet ga-esi mee ihe kachasị mma iji gosipụta ọrụ nke ha site na ibe gị (lezie anya ka ị ghara itinye aka na ya).
Kedu ihe kpatara ị ga - eji debe nlebara anya nke ndị mmekọ ma ọ bụrụ na ezubere okporo ụzọ gị na saịtị gị?
Obi abụọ adịghị ya, gị ezubere iche okporo ụzọ bụ ihe nwekwara ike ịbụ ezubere iche maka ahịa ha ma ọ bụ nka ha. Ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, saịtị gị na-enye njikọ weebụ dị oke ọsọ, mgbe ahụ, okporo ụzọ gị nwere ike igosi na ọ bara uru na mgbakwunye nke na-enye spyware. Onye ọ bụla nke na-eji web ahụ eme ihe nwere ike ịbanye na nzuzo nke onye ọ bụla n'ihi mmemme nke enwere ike ịtọlite ​​na kọmputa gị n'amaghị ama.
Onye ọ bụla chọrọ njikọ weebụ nwere ike iche n'echiche banyere ịzụta mgbochi spyware kwa. Nke a bụ ebe gị ezubere iche okporo ụzọ weebụsaịtị ejedebe ịbụ a kediegwu catch maka ndị ọzọ metụtara òtù (karịsịa maka gị rivals- nke bụ ya mere na ị chọrọ ka nọgidere na-eme ka ụfọdụ na gị na saịtị ahụ nwere zuru okè online search engine ikike iji nweta ihe niile kwere omume zubere okporo ụzọ).
Ikike a gafere ihe ọ bụla na - egosi na saịtị gị nke nwere ike ịpị ndị ọbịa ịchọrọ. Mgbe ọrụ aha gbazitere mpaghara n'ime ụlọ ahịa, nzukọ aha ga-erite uru site na mkpesa nke ndị ọzọ.
Nke a bụ kpomkwem yiri Mgbakwunye ịzụta otu mpaghara ma ọ bụ ịgbazinye ego site na weebụsaịtị gị ọ bụla. Dị ka o kwesịrị ịdị, nzukọ a na-akpọ aha agatụbeghị agbazite mpaghara n'ime ụlọ ahịa ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka nnukwu nlepụ anya kwa ụbọchị. N'ihe banyere saịtị gị, na-enweghị okporo ụzọ ezubere iche nke nwere ike ịbụ n'ihi ihe ọjọọ, ị nweghị ike ịbụ onye ikike yana nke a ị gaghị eweghara uche onye ọ bụla.
Ebe nrụọrụ na-enwerịrị okporo ụzọ ezubere iche nwere ike ịnweta ohere iji kpokọta nkọwa gbasara ndị ọbịa ya. Nwere ike ịnye ndị ọbịa gị nhọrọ ịdebanye aha maka weebụsaịtị gị site na ịnweta adreesị ozi-e ha (na ọbụlagodi adreesị na akara ekwentị) ka ị nwee ike izigara ha ọkwa mgbe ọ bụla ọganihu na weebụsaịtị gị.
Nkọwa ndị a, ewezuga ịchebara nzukọ gị echiche, ga-aba uru na ndị mmekọ. Enwere ike iji ndepụta a mee ihe maka ụlọ ndepụta, ire ere dị nro, na ọrụ ahịa ndị ọzọ metụtara. Kpachara anya n'agbanyeghị nsogbu ụfọdụ ị ga - enweta na ndị ga - eduga.
GỤRỤ AHỤ Nhazi okporo ụzọ ezubere iche
Na site n'inwe njikọ na saịtị nwere nnukwu okporo ụzọ ezubere iche ugbu a na-eweta abamuru nke ndị mmekọ maka ị bawanye ogo nke weebụsaịtị ha. Backlinks dị ezigbo mkpa ịtụle ịnweta saịtị. Inwe ha sitere na saịtị ndị a tụkwasịrị obi bụ ihe dị mkpa iji webata ududo ududo nchọta ihe n'ịntanetị.
Ihe ezubere iche saịtị ị nwere bụ ihe ga-eme ka saịtị gị nwee nkwanye ùgwù.
Inwe saịtị magburu onwe ya ga-enye gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na-enweghị njedebe ndepụta nke ohere iji nwee ihe ịga nke ọma na ụwa dijitalụ. Kpọsị ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie maka ịzụ ahịa saịtị, ị nwere ike ịchọpụta na ị nwere ike ime karịa karịa ịzụ ahịa na ịnye ụlọ ọrụ gị iji kpuchido ego ị na-enweta.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na saịtị gị na-enye njikọ weebụ dị oke ọsọ, mgbe ahụ okporo ụzọ gị nwere ike igosi na ọ bara uru na mgbakwunye nke na-enye spyware. Banyere saịtị gị, na-enweghị okporo ụzọ ezubere iche bụ nke nwere ike ịbụ n'ihi ihe ọjọọ, ị nweghị ike ịbụ onye ikike, yabụ na ị gaghị ewepụ uche onye ọ bụla.
Na site na ijikọ ya na saịtị nwere nnukwu okporo ụzọ ezubere iche na-eweta abamuru nke ndị mmekọ na ntinye nke ogo weebụsaịtị ha.